USA: Jamhuuriga & Dimuqraadiga oo mar kasta sii kala fogaanaya – Kasmo Newspaper
USA: Jamhuuriga & Dimuqraadiga oo mar kasta sii kala fogaanaya
Updated - October 8, 2017 5:55 am GMT
London (Kasmo), Kala jabka u dhexeeya Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee dalka Maraykanka wuxuu gaaray heer sare oo an wali horey loo arag, farqiga dadka kala xambaarsan fikradohoodana wuxuu si gaar ah ugu sii kordhay muddooyinkii dambe, isaga oo heerkiisii ugu sarreeyay garay sannadkii 1aad ee Maamulka Trump.
Sidaas waxaa qoraysa ra’yi ururinta (Survey) Machadka “Pew Research Center” ee fadhigiisu yahay Washington, kana mid ah Xarumaha ugu muhimsan Cilmibaarista Maraykanka.
Nuxur ahaan dadweynaha kala taageera 2da xisbi waligood sidaan oo kale uguma kala fogaan arrimaha sida: Xukuumadda, Midabka, Soo-galootiga, Nabadgalyada qaranka iyo Badbaadada Deegaanka. Waa calaamado soo bilowday xilligii Barack Obama, siina xoogaystay intii la doortay Donald Trump.
Machadku wuxuu dadweynaha Maraykanka u jeediyay isla 10kii su’aalood ee sannadkii 1994kii, ee arrimaha la xiriira “Qiyamka siyaasiga”.
Isku celcelinta farqiga u dhexeeya aragtiyada dadkii u codeeyay sannaddadii u horreeyay Maamulkii Clinton wuxuu ahaa 15 dhibcood, maantase waa 36, wuxuuna kordhay 33% tan iyo 2014kii.
Kala safashada laba qolo waa ka sii qoddo dheertahay doodda khaaliska ah ee siyaasadda oo qur ah: tusaale ahaan jamhuurigu waxay jecelyihiin nolosha meelaha miyiga ah, halka Dimuqraadigu jecelyihiin magaalooyinka.
Qolada hore waxay si aad ah u qiimeeyaan guryaha waaweyn ee kala xayndaabka ah, halka Dimuqraadigu jecelyihiin nolosha guryaha yaryar eek a dhow agagaarka Dugsiyada iyo goobaha ganacsiga.
Laakiin waxaa jira arrin kale oo ay ku sii kala qaybsanyihiin oo ah oo ah haysashada hubka, taas oo, xasuuq kasta dabadii ay ka dhalato doodda soo noqnoqota ee Maraykanka.
Maalintii ka dambaysay xasuuqii Las Vegas, Daraasad lagu xusay “Survey Monkey” waxaa is-barbardhig lagu sameeyay khariidadda Doorashooyinkii 2016kii iyo midda hubka dalka.
Gobol kasta (marka laga reebo Vermont oo qur ah), intooda badan codbixiyeyaashu waxay haystaan hub, waxayna caddeeyeen in ay Donald Trump u codeeyeen. Taas cagsigeeda, inta ugu badan muwaadiniinta an hubka haysan waxay u codeeyeen Hillary Clinton.